Mikel Arteta Oo Cayaartoyda Muslimka Ah Ka Sifaynaya Arsenal – Heemaal News Network
Arsenal waxay mudnaanta koowaad ka dhigan doontaa bisha January inay daaqadda ka saarto qaar ka mid ah ciyaartoygeeda, sida uu xaqiijiyey tababare Mikel Arteta.
Laacibka khadka dhexe ee Mesut Ozil oo heshiiskiisu ku egyahay dhamaadka xili ciyaareedkan, isla markaana hore looga saaray liiska kooxda ee tartamada Premier League iyo Europa League ayaa ugu horreeya liiska ciyaartoyda ay Arsenal qorshaynayso inay kooxdeeda ka fasaxdo.
Waxa kale oo la sheegay in liiska ay ku jiraan difaacyada Muslimka ah ee Shkodran Mustafi iyo Saed Kolasinac oo si dhif ah uga soo muuqday safka kooxda xili ciyaareedkan.
Mikel Arteta oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi: “Masii wadi karno tirada ciyaartoyda aanu ku haysano boos walba. Waxa jira ciyaartooyo ku bixi doona amaah iyo kuwo tegi doona, taas ayaa ah muhiimaddayada.
“Kaddib waxaanu eegi doonaa haddii aanu haysano fursadaha ku habboon ee boosaska aanu uga baahanahay caawimada badan.”
Mar wax laga weydiiyey wararka sheegaya in difaaca bidix ee reer Bosnia ee Kolasinac uu u dhow yahay inuu ku laabto kooxdiisii hore ee Shalke, waxa uu Arteta yidhi: “Tirada ciyaartoyda aanu hadda haysano dhab ahaantii way badan yihiin, laakiin hadda waxba ma xaqiijin karno.”
Arsenal waxa amaah kaga maqan saddexda ciyaartoy ee Konstantinos Mavropanos oo Stuttgart ku maqan, Lucas Torreira oo Atletico Madrid ay u direen iyo Matteo Guendouzi oo Hertha Berling ku maqan.
Kooxdan oo dhibaatootay kulamadii horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan ayaa labadii ciyaarood ee ugu dambeeyey guulo heshay, sarena uga soo kacday booskii 15aad ee ay toddobaadyada fadhiday, waxaanay soo gashay kaalinta 13aad.
Kulanka ugu soo horreeya, waxay sannadka cusub la ciyaari doontaa West Bromwich Albion oo kaalinta 19aad kaga jirta miiska kala-sarraynta, waxaana guul kale oo ay kasoo hooyaan ay ka caawin kartaa inay ka mid noqdaan tobanka sare.
Ciidamo Lagu Daa’diyey MagaalooyinkaDalka Kenya Iyo Cabsi Jirta
MoSalah Oo Dhaleecayn Xoogan Kala Kulmay Bulshada Muslimka
ManUn Oo Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalka Ole Gunnar Solskjaer Ee Kooxda
Heemaal December 10, 2020